Muparidzi 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Kuva nezvakawanda usingafari (1-6)
Fadzwa nezvinhu zvaunazvo iye zvino (7-12)
6 Pane rimwezve dambudziko randakaona pasi pezuva, uye rinogara richisangana nevanhu: 2 Mwari wechokwadi anopa munhu pfuma nezvinhu zvekurarama nazvo nekukudzwa, zvekuti haana chaanoshaya pazvinhu zvaanoda;* asi Mwari wechokwadi haaiti kuti afadzwe nazvo, asi anoita kuti mumwewo munhu afadzwe nazvo. Izvi hazvina zvazvinobatsira uye zvinotambudza chaizvo. 3 Kana murume akava nevana zana uye akararama kwemakore akawanda osvika pakukwegura, asi asingafadzwi* nezvinhu zvake zvakanaka asati asvika kuguva,* ndinoti mwana anozvarwa akafa ari nani kumupfuura.+ 4 Nekuti iye akauyira pasina uye akaenda murima, uye zita rake rakaputirwa murima. 5 Kunyange zvazvo asina kumboona zuva uye asina kana chaaiziva, ari nani* pane uya wekutanga.+ 6 Zvinobatsirei kurarama zviuru zvemakore zvakapetwa kaviri asi pasina mufaro? Vese havaendi kunzvimbo imwe chete here?+ 7 Kushanda nesimba kwese kunoitwa nemunhu, anenge achiitira muromo wake;+ asi anongoramba achida kudya.* 8 Nekuti munhu akachenjera anopfuura benzi pachii,+ uye zvinobatsirei kana murombo achiziva zvekuita kuti ararame?* 9 Zviri nani kufadzwa nezvinoonekwa nemaziso pane kuda zvinhu zvausingakwanisi kuva nazvo.* Izviwo hazvina zvazvinobatsira, kudzingana nemhepo. 10 Chinhu chese chiripo chagara chakapiwa zita, uye zvinozivikanwa kuti munhu chii; uye haagoni kuitisana nharo neuya* ane simba kumupfuura. 11 Kuwanda kwemashoko,* ndikowo kuwanda kwekusabatsira kwawo; uye munhu angabatsirwei nawo? 12 Ndiani anoziva zvakanyatsonakira munhu kuti aite muupenyu pamazuva mashoma eupenyu hwake husina zvahunobatsira, anopfuura semumvuri?+ Nekuti ndiani angaudza munhu zvichazoitika pasi pezuva kana aenda?
^ Kana kuti “zvinodiwa nemweya wake.”
^ Kana kuti “mweya wake usingafadzwi.”
^ Kana kuti “uye kunyange guva risati rava rake.”
^ ChiHeb., “ane zororo.”
^ Kana kuti “mweya wake haugutswi.”
^ ChiHeb., “afambe pamberi pevapenyu.”
^ Kana kuti “pane kufamba-famba kwemweya.”
^ Kana kuti “kumiririra nyaya yake pamberi peuya.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kwezvinhu.”